Ahiahina vaky fasana :: Sarona ireo telo lahy niaraka tamina taolan-dava fito amby efapolo • AoRaha
Ahiahina vaky fasana Sarona ireo telo lahy niaraka tamina taolan-dava fito amby efapolo
Taolan-dava miisa fito amby efapolo, nitadiavana mpividy tao Antsirabe, no saron’ny polisy, ny alahady lasa teo. Lehilahy telo voalaza ho mpamaky fasana no sarona niaraka tamin’ireo taolambalo ireo.
Tao anatin’ny iray volana izay dia nirongatra izay tsy izy ny vaky fasana, tany amin’ny faritra Vakinanka­ratra, indrindra tao amin’ny distrikan’i Betafo sy ny mano­didina. Samy nanokatra fanadihadiana sy fikarohana izay mety hahavanona ireo asa ratsy ireo avokoa ny tompon’andraikitra voa­kasika. Nahomby ny vela-pandrika ny polisy eo anivon’ ny Kaomisarian’Antsirabe ka nahatrarana ireto taolan-dava am-polony maro.
Loharanom-baovao avy amin’olona tsara sitrapo no nahafantarana ny fisian’ireo taolam-paty nitadiavana mpividy ireo, raha ny fanazavana voaray avy amin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ ny Polisim-pirenena. Napetraka ny vela-pandrika tamin’ ny fifanomezana fotoana tamin’ireo mpivarotra sy ireo olona nanjonoana azy ireo.
Toerana iray somary mihataka ny tanànan’Antsirabe no nifanarahana hanaovana ny takalo. Nony tonga teo amin’ilay toerana dia natao ny adivarotra tamin’ny lehilahy iray tompon’ireo entana. Niantso ny namany izy rehefa nahazo toky tamin’ireo nitonona ho mpividy, ka tsy ela akory dia tonga niaraka tamin’ireo taolam-paty natao tao anaty gony. Teo am-pamo­ahana ireo entana izy ireo no nivoaka tampoka ihany koa ireo polisy izay efa niomana tamin’ny fanatan­terahana ny asany ka noraisim-potsiny izy telo lahy.
Niaiky ny heloka vitany izy telo lahy ireto sady nanamafy fa izy ireo ihany no namaky ny fasana tao Amba­tomenaloha, fokontany
Tsaravavaka Andranomanelatra nakàna ireo taolan-dava miisa fito amby efapolo avy aminà razana fito ambin’ny folo ireo.
Fanafihana mpivarotr’omby Nifanenjehana ilay miaramila iray miaraka amin’ny basy
Fanafihana kamiao Hafindra eny Tsiafahy ireo efa-dahy nahafaty mpamily
Toamasina Trano nahitana môtô halatra enina
Fiampitana nitera-doza :: Zazalahy mpianatra naratra voadonan’ ny kamiao
Fitakiana an’ireo nosy kely manodidina :: Nikatso teo amin’ny resaka fiandrianam-pirenena ny fifampidinihana